Home » သတင်း » ENCO IBC2017 မှ MOM နဲ့အဖေတို့အတွက်နယူးတီထွင်ဆောင်ကြဉ်း
ENCO IBC2017 မှ MOM နဲ့အဖေတို့အတွက်နယူးတီထွင်ဆောင်ကြဉ်း
ဝေးလံခေါင်ဖျားအသံလွှင့်မှုအတွက် cloud-based tools တွေကိုတစ်ခုတိုးချဲ့ suite ကိုအပါအဝင် TV နဲ့ရေဒီယို station များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် tools များနှင့်အင်္ဂါရပ်မိတ်ဆက်ဖို့အသံလွှင့်အလိုအလျောက်အတွက်ခေါင်းဆောင်,
Southfield, MI, သြဂုတ်လ 11, 2017 - လုပ်ငန်းလည်ပတ် burdens.ENCO လျှော့ချနေချိန်တွင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးကိုများကိုချဲ့ထွင်လိမ့်မည်ဟု၎င်း၏တီဗီနှင့်ရေဒီယိုအလိုအလျောက်စနစ်များစတူဒီယိုနှင့်ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဤသစ်ကိုအလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများမိတ်ဆက်ပေးဦးမည်ပိုပြီးအိုင်ပီ workflow နှင့် virtualized ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှထုတ်လွှင့်အကူးအပြောင်းနှင့်အမျှ ENCO အသစ်သောဆော့ဖ်ဝဲကို-defined tools တွေကိုမိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ RAI အမ်စတာဒမ်မှာအရပျကိုစက်တင်ဘာလ 2017-15 ယူပြီး IBC19 မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိသတ်များအတွက်။ ENCO ရပ် 8.D74 မှာထားပါတယ်။
ရုပ်မြင်သံကြားခြမ်းတွင်, ENCO ယင်း၏အဘို့အ updates များကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် MOM စံအလိုအလျောက်-related တာဝန်များကိုနှင့်တီဗီထုတ်လုပ်မှုအခြေခံအဆောက်အဦသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းထက်ကျော်လွန် MOM ကိုတိုးချဲ့ (မီဒီယာလုပ်ငန်းမန်နေဂျာ) စနစ်။ ဤတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရုပ်သံလိုင်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံဂရပ်ဖစ်မီးစက်, ကွန်ယက်စက်ပစ္စည်း Interface (NDI) ဆက်သွယ်မှုများနှင့်တိုက်ရိုက်ကင်မရာနှင့် NDI သွင်းအားစုနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ပြသထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတို့အတွက်ထောက်ခံမှုပါဝင်သည်။ NDI-connected devices များအတွက်၎င်း၏ထောက်ခံမှုယခုအသုံးပြုသူများကိုအလွယ်တကူ bidirectional SD ကဝေမျှဖို့ခွင့်ပြု HD IP ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် MOM ရဲ့တန်ဖိုးကိုချဲ့ - တစ်ခုတည်း, နေရာအနှံ့, စံ Gigabit ကွန်ယက်ကိုကျော်နှင့် 4K / UHD ဗီဒီယိုက။
MOM cable ကိုရုပ်မြင်သံကြားစစ်ဆင်ရေးများနှင့်မီဒီယာစီးဆင်းမှုကိုပံ့ပိုးပေး, ထုတ်လွှင့်ပူဇော်ရန်စျေးကွက်အတွင်းမှထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံရုပ်သံလိုင်းပလေးအောက်အလုပ်များကိုကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းစည်းရုံးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးရှိစွာ yetcomprehensive ပလက်ဖောင်းသို့ဆောငျခဲ့ကွ - ကြောင်း ENCO ရေဒီယိုအလိုအလျောက်ဖောက်သည်အတူတူပင်ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ နှစ်ယောက်ထက်ပိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားကြပါပြီ။
ပိုပြီးစျေးကြီးစနစ်များပုံမှန်ရှုပ်ထွေး spreadsheet ကဲ့သို့သော interface ကို Eschewing, MOM တစ်ခုတည်းအော်ပရေတာအဆုံးမှအဆုံးသို့အားဖြင့်လိုအပ်သောမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပလေးအောက်အလုပ်များကိုအားလုံးကိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့်အမြန်သင်ယူမှုကွေးနဲ့အလိုလိုသိ, သော graphical On-ဝေဟင် user interface ကို leverages ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာ။ အပြည့်အဝပလက်ဖောင်းစားသုံးမိ, မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု, ဂရပ်ဖစ်, အမှတ်တံဆိပ်, Multi-format ကို transcoding unifies နှင့် 24 /7ပေါင်းစုံစဉ်အချိန်ဇယားဆွဲ, အပြောင်းအလဲများကို logging, လက်စွဲစာအုပ်ပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်သွင်းထိန်းချုပ်မှုနဲ့တူလုပ်ငန်းများ, ရိုးရှင်းသောဆွဲ-and တစ်စက်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်အတူကွပ်မျက်ခံရနိုင်ပါသည် ပလေးအောက် -channel ။
"အိုင်ပီ-based စစ်ဆင်ရေးမှအကူးအပြောင်းလျှင်မြန်စွာတိုးချဲ့သည်နှင့်အသုံးပြုမှုနှင့်ကျယ်ပြန် feature ကိုထား၏ MOM ရဲ့လွယ်ကူခြင်းမဆိုဘတ်ဂျက်အဆင့်မှာထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အိုင်ပီကွန်ယက်ကို-based ထုတ်လုပ်မှု Workflows ဖို့ပြောင်းရွှေ့ရိုးရှင်းနှင့်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ပါလိမ့်မယ်နှစ်ဦးစလုံး" ကဲန် Frommert သမ္မတ ofENCO ကဆိုသည်။
ENCO ရဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဟာအဖေပလက်ဖောင်းရှည်လျားသောရေဒီယိုအလိုအလျောက်များအတွက်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်ခဲ့ရှိရာရေဒီယိုအခြမ်းအပေါ်နေဆဲဖြစ်သည်။ IBC2017 မှာ ENCO ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သတင်းကဏ္ဍစစ်ဆင်ရေးများအကြားတင်းကျပ်ပေါင်းစည်းမှုကိုသရုပ်ပြ, နှင့်၎င်း၏ Visual ရေဒီယိုဖြေရှင်းချက်၏တန်ခိုးနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါပြပါလိမ့်မယ်။
သတင်းကဏ္ဍစစ်ဆင်ရေးများအတွက် ENCO ဖေစနစ်များကိုမဆို MOS-supported သတင်းကဏ္ဍ system ထဲကနေပိုင်ဆိုင်မှုကိုထုတ်ကစားရန်ခွင့်ပြုမှ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် MOS Interface ကိုမိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။ မီဒီယာ Object ကိုဆာဗာ (MOS) သတင်းကဏ္ဍကွန်ပျူတာစနစ်များကိုအသုံးပြုတဲ့ protocol ကိုနဲ့ပါတ်သက်ဘို့ထောက်ခံမှုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်အဖေသည်အသုံးပြုသူများယခု add-စီမံခန့်ခွဲရွှေ့နှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံ-အသံသတင်းပုံပြင်များထဲမှာ embedded နိုင်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲများသည်အလိုအလျောက်ရက်စွဲအထိအရာအားလုံးစောင့်ရှောက်ရန်ဖွင့်စာရင်းများကိုနှင့်အတူထပ်တူပြုနေကြသည်။
တီဗီစစ်ဆင်ရေး၎င်း၏ MOM အလိုအလျောက်စနစ်, ENCO ရဲ့လိုပဲ Visual ရေဒီယို ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအဖေရဲ့ရေဒီယိုအလိုအလျောက်နှင့်စီမံခန့်ခွဲ interface ကို၏တန်ခိုးမူတည်ပြီး မာလ်တီမီဒီယာ ကို web နှင့်မိုဘိုင်းပရိသတ်တွေမှအတွေ့အကြုံကို။ ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါရေဒီယိုထုတ်လွှင့်အွန်လိုင်း programming ကိုငွေရရှိအောင်ကူညီဖို့ပစ်မှတ်ထားကြော်ငြာထောက်ခံမှုအပါအဝင်တစ်ခုတည်းစုစည်းပလက်ဖောင်းကနေ content တွေကိုရှာမှီးခြင်းမှအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေဖို့တဆင့်အရာအားလုံးကိုထောကျပံ့နိုငျသောအာမခံထား။
ENCO ရဲ့အဖေကမိသားစုကိုပိုပြီးမကြာသေးမီကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှု၏ဧရိယာသို့တိုးချဲ့ပေးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ကြီးထွားလာ enCloud suite ကို၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ENCO IBC မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်ဖို့ WebDAD မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ WebDAD ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူမည်သည့်ဝေးလံခေါင်ဖျားတည်နေရာကနေရေဒီယိုဘူတာရုံအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ယူခွင့်ပြုကြောင်းပထမဦးဆုံး ENCO enCloud ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ စတူဒီယိုထဲမှာအဖေဖို့တိုက်ရိုက်လိုင်းနှင့်တကွ, ထုတ်လွှင့်မည်သည့်စံနှုန်းကို web browser ကိုမှတဆင့်အိုင်ပီကျော်ပြည့်စုံ On-ဝေဟင် interface ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကအဆုံးမှအဆုံးသို့လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုဖြတ်ပြီး On-ဝေဟင်တင်ဆက်မှု, သီချင်းစာရင်းကိုကိုင်တွယ်, အသံခြေရာခံခြင်းနှင့်အခြားအရေးပါထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်မောင်းနှင်နိုင်စွမ်းပါဝင်သည်။
WebDAD တူသော Technologies ကအချိန်ပြည့်ဘူတာရုံ်ထမ်းများအတွက်အသစ်ကလုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်စွာမိတ်ဆက်ပေးဒါပေမယ့်လည်းပလေးအောက် system ကိုဝင်ရောက်ဖို့အခြိနျပိုငျး, စာချုပ်နှင့်ဝေးလံခေါင်သီလုပ်သားများကိုခွင့်ပြုမသာ။ ဤသည်ဖြန့်ကျတ်အလုပ်အင်အားစုနှင့်အတူဘူတာမှတံခါးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အခွက်တဆယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကနေခြေရာခံ voice နိုင်စွမ်းနှင့်အတူအများအပြားစျေးကွက်များတွင်ကြားသိစေခြင်းငှါခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
WebDAD မိုဘိုင်းသတင်းစာပညာနှင့်ဝေးလံခေါင်သီသောစကားသံခြေရာခံခြင်းများအတွက်ရေပန်းစား tools များပါဝင်သည်သော enCloud suite ကို, ချဲ့ထွင်။ နောက်ထပ်မကြာသေးမီကမိတ်ဆက်လျှောက်လွှာ, Weblib2 အသုံးပြုသူများကိုအဝေးမှသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ကိုအသုံးပြုပြီးကြည့်ရှုပြုပြင်မွမ်းမံမီဒီယာစာကြည့်တိုက်များ, ဖွင့်စာရင်းများကိုတည်းဖြတ်နှင့်ထို့ထက် ပို. ခွင့်ပြုပါတယ်။ ENCO လည်း IBC မှာ Weblib2 သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။
ENCO ထုတ်လွှင့်တစ်ခုတည်းကိုချွတ် running ENCOautomation စနစ်များကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ပေးနိုင်ပုံပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူတီဗီနှင့်ရေဒီယိုအဘို့အ virtualized အလိုအလျောက်၏တန်ဖိုးဆွေးနွေးကြမည် ENCO1 virtualized server ကို။ ENCO1 ENCO software ကိုဖြေရှင်းချက်တည်ဆဲ IP ကိုအသံနှင့်ဗီဒီယိုနည်းပညာများပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများအားဖြင့်တစ်ဦး virtualized ပတ်ဝန်းကျင်တွင် run ထိထိရောက်ရောက် run ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
"အိုင်ပီ-based virtualization ဆီသို့ဒီအပြောင်းအရွေ့အတွက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ် overhead လျှော့ချနှင့်အဆောက်အဦမှထိန်သိမ်းအာကာသပြန်လာလိမ့်မယ်" ဟု Frommert ကဆိုသည်။ "တချိန်တည်းမှာပင်, ကပိုကောင်းပိုပြီးထိရောက် cloud-based နှင့် virtualized စစ်ဆင်ရေးများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးသားထားပါတယ်သောထုတ်လွှင့်ရေဒီယိုစစ်ဆင်ရေး၏ဝေးလံခေါင်သီလက်လှမ်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ "
1983 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ENCO စနစ်များတစ်ဦးပလေးအောက်ကိုကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနှင့်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအဖွဲ့အစည်းများတောင်းဆိုများအတွက်အလိုအလျောက်စနစ်အားဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ENCO Southfield, မစ်ရှီဂန် USA တွင်ရုံးချုပ်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: www.enco.com.
TNDV: ရုပ်မြင်သံကြားလှူဒါန်းမှုနယူးနည်းပညာအလယျပိုငျး Tennessee ပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့မီဒီယာဝိဇ္ဇာအစီအစဉ် - ဇွန်လ 27, 2018
35 နောက်ထပ် GatesAir Flexiva ™ Air ကို-အအေး radio transmitter ကို Install Cumulus မီဒီယာ - ဇွန်လ 26, 2018
GatesAir Bolsters Global Executive Team - ဇွန်လ 25, 2018
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ပေါင်းစည်းမှု SoftAtHome, MStar, CES2017 တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-08-11
ယခင်: အေဂျင်စီ Scout နှင့်အတူမီးပြတိုက်ရုပ်ရှင် '' နယူးကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လတ်ဆတ်တဲ့လေကိုရှုဖြစ်ပါသည်
နောက်တစ်ခု: ကွမ်တမ် SureStaQ်4K သိုလှောင်
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "ENCO IBC2017 မှ MOM နဲ့အဖေတို့အတွက်နယူးတီထွင်ဆောင်ကြဉ်း" ။ http://www.broadcastbeat.com/enco-brings-new-innovations-for-mom-and-dad-to-ibc2017/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။